Mandalay Division Archives - LODGGY
Category: Mandalay Division
Instagram Cafés in Mandalay
August 17, 2020 Aung Toe	cafe, Food, Mandalay, Myanmar
နန်းဆန်တဲ့ မန္တလေး၊ တော်ဝင်တဲ့ ရွှေမန်းမြို့မှာ အထာကျတဲ့ အချိုးကျပေါင်းစပ်မှုကတော့ Instagramatic ဖြစ်တဲ့ Café တွေပါပဲ။ ဒီလို Aesthetics ဖြစ်ပြီး Young vibe ကို ရနေတဲ့ Café တွေ မန္တလေးမှာရှိနေတယ်ဆိုတာ တကယ့်ကို WOW ပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် ဒီနေ့ Lodggy က ရန်ကုန်ကလူတွေ မန္တလေးရောက်ခဲ့ရင် ဝင်လည်လို့ရအောင် မန္တလေးက မသိသေးတဲ့သူတွေလဲ သိအောင် တခြားမြို့က လည်ချင်တဲ့သူတွေလဲအဆင်ပြေအောင် မန္တလေးမြို့မှာရှိတဲ့ Instagram Café တွေကို တစ်စုတစ်စည်းထဲတင်ပေးပါမယ်ဗျ။ Casa Café Design studio + cafe shop လေးဖြစ်ပါတယ်။ လူငယ်တွေ အကြိုက် contemporary design လေးနဲ့ event pop-up …
Read the full post →“Instagram Cafés in Mandalay”
LeaveaComment on Instagram Cafés in Mandalay
June 30, 2020 kyaw kyaw	Myanmar, Pyin Oo Lwin
?ပန်းမြို့တော် ပြင်ဦးလွင်က အရမ်းလှတဲ့မြို့လေးဖြစ်သလို တည်းခိုဖို့ ဟိုတယ်လှလှလေးတွေလည်း အရမ်းပေါပါတယ်။ တောင်ပေါ် အငွေ့အသက်ရစေမယ့် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ဘန်ဂလိုလေးတွေမှာတည်းရင်တော့ ခရီးသွားဓါတ်ပုံလှလှလေးတွေအပြင် ဟိုတယ်လေးတွေနဲ့ အမိုက်စားပုံလေးတွေပါ ရိုက်လို့ရမှာပါ။ နောက်တစ်ခါ ပြင်ဦးလွင်သွားရင် ဘယ်မှာတည်းကြမလဲဆိုတာ ဟိုတယ်ကြိုရွေးလိုက်ရအောင်.. 1.Agga Pyinoolwin?အခုနောက်ပိုင်း ခေတ်စားနေတဲ့ Tiny House အိမ်ပုံစံလေးတွေကိုဆောက်လုပ်ထားတဲ့ ပြင်ဦးလွင်ရဲ့ ပထမဆုံး Tiny House လေးပါ။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အရောင်စုံအိမ်သေးသေးလေးတွေထဲမှာမှ အိပ်ခန်း၊ ရေချိုးခန်း၊ ဧည့်ခန်းတွေကို ဖွဲ့စည်းထားတာပါ။ အိမ်လေးတွေနဲ့ကော၊ အိမ်အထဲမှာပါ ဓါတ်ပုံရိုက်လို့အရမ်းလှပါတယ်။ မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းလေးပေါ်က ခုံလှလှလေးတွေမှာထိုင်ပြီး အေးချမ်းလှပတဲ့ တောင်ပေါ်မြို့လေးရဲ့ အလှတရားတွေနောက်ကို စီးမျောလို့ရပါတယ်။ ?လိပ်စာ – လမ်းသာယာလမ်း သစ္စာလမ်းသွယ်၊ ဂန္ဓမာမြိုင်ပန်းခြံနှင့် မြို့ပတ်လမ်း (ကန်တော်ကြီးအဝိုင်း) အနီး၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့။ 2.Golden Gate …
Read the full post →“ပြင်ဦးလွင်က အလှဆုံးဟိုတယ်များ”
LeaveaComment on ပြင်ဦးလွင်က အလှဆုံးဟိုတယ်များ
June 11, 2020 Eyint Kyi Pyar Zaw	Mandalay, Myanmar
ဒီနေ့ Blog လေးက မန္တလေးကနေ ခရီးသွားချင်တဲ့ ရွှေမန်းသူ မန်းသားတို့အတွက် ဘယ် Destinations ကို ရွေးကြမလဲ တဲ့ Blog လေးပါ။ ဒီ link ထဲမှာ Blogger 5ယောက်ရဲ့ မတူညီတဲ့ Destinations တွေကို စုပေးထားပါတယ်ဗျာ။ 1.Siraveller – Travel with SiThu ရဲ့ “လူတွေသိပ်မသိသေးတဲ့ ကမ္ဘာကျော်လာတော့မယ့် မြန်မာပြည်က နေရာလေးတစ်ခု” စစ်ကိုင်းဘက်က ကျောက်စာစေတီပေါင်း(၁၃၅၀)ဆူ တည်ဆောက်ထားတဲ့ ရှင်သီဝလိတောရကျောင်းမှ ဓမ္မစေတီများအကြောင်းနှင့် ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာ ဘာတွေတွေ့နိုင်မလဲဆိုတာကို အသေးစိတ်ရေးပြပေးထားပါတယ်။ဒီ ကျောက်စာစေတီတွေက ကမ္ဘာ့ဂင်းနစ်စံချိန်ချိုးဖို့လဲ ကြိုးစားနေကြောင်းသိရပါတယ်။ Original post https://www.facebook.com/768428373353078/posts/1384806748381901/?d=n 2.My Khayee – မိုင်ခရီး ရဲ့ သဘာဝနဲ့ အနီးကပ်တွေ့ခြင်း (Babylon …
Read the full post →““မန္တလေးနဲ့ဆို နီးပါတယ်””
LeaveaComment on “မန္တလေးနဲ့ဆို နီးပါတယ်”
May 26, 2020 kyaw kyaw	Mandalay Division, Myanmar, Pyin Oo Lwin
အရင်အင်္ဂလိပ်ခေတ်က ဘုရင်ခံတွေ၊အမှုထမ်းတွေက နွေရာသီ အပူရှောင်ရန် တောင်ပေါ်စခန်းမြို့ အနေနဲ့ ရုံးထိုင်ခဲ့တော့ အဲ့ခေတ်ထဲက ရှိခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်းရာချီရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ ကိုလိုနီခေတ်အဆောက်အအုံ( မြိုင်) တွေအကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ ထိုအဆောက်အအုံတွေထဲက တချို့ကို ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေး ဝန်ကြီးဌာနကလည်းကောင်း၊တပ်မတော်က လည်းကောင်း၊ သစ်တောဦးစီးဌာနက လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာဌာနများကလည်းကောင်း ထိန်းသိမ်းထားမှု ရှိသလို ပုဂ္ဂလိကပိုင်များလည်း ရှိပါတယ်။ပြင်ဦးလွင်မှာ အစကတော့ မြိုင် ၉ မြိုင်ရှိတယ်လို့ သိထားပေမဲ့ လက်တွေ့မှာ ၉ ခုမကရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ အခုအောက်ပါ မြိုင်တွေကတော့လက်လှမ်းမှီသလောက် မြိုင်တွေကိုစုစည်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အခုလက်ရှိအချိန်မှာ မြိုင်အများစုက အထဲထိလေ့လာခွင့်မရသေးပါဘူး။ နန်းမြိုင် (Craddock Court)နန်းမြိုင်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ သရဲခြောက်တဲ့ အခန်း 101 ရှိတဲ့ဟိုတယ်လို့ အများစုကတော့ပြေးမြင်ကျတာအမှန်ပဲ။ ၁၉၁၈ မှ ၁၉၂၂ ထိအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ ဒုတိယဘုရင်ခံ Sr. …
Read the full post →“ပြင်ဦးလွင် မြို့ရဲ့ မြိုင်များ”
LeaveaComment on ပြင်ဦးလွင် မြို့ရဲ့ မြိုင်များ
April 24, 2017 Aung Toe	English, Hotel Reviews, Mandalay, Mandalay Division
Best WesternEastern Palace Hotel is part of Best Western Hotels & Resorts family that has operates over 4000 hotels worldwide. Eastern Place Hotel is their first partner hotel in Mandalay and read more to find out how they fair for their first establishment.
business hotel, hotel review, mandalayLeaveaComment on Eastern Palace Best Western Hotel Review